हेर्नुस् नेपालमै डिजाइन गरिएको बाइक ‘सुन्तली’, क्लासिक ३५० - Nepali Online News Media-shikharnews.com
विदेशतिर कस्टमाइज गरिएका बाइकको निकै नै चर्चा हुने गर्छ । यस्तै चर्चा बटुल्ने खालको यो रोयल इन्फिल्ड क्लासिक ३५० बाइक हो । सुन्तला कलरमा सजिएकोले यसको नाम सुन्तली राखिएको छ ।
प्रविण राईको यो बाइकलाई नासा रोयल इन्फिल्डर्समा कस्टमाइज गरिएको हो । यसको डिजाइन प्रकाश लिम्बुले गरेका हुन् भने फिटिङ चाहिं हेड मेकानिक अनिल दासले गरेका हुन् ।
यातायात व्यवस्था विभागबाटै अनुमति लिएर यसको डिजाइन गरिएको लिम्बुले बताए । यसमा पित्तलको लुकिङ ग्लास, हेड कभर, लिभर, ब्याक लाइट, साइड ब्याक कभर आदि प्रयोग गरिएको छ ।
काठमाडौंको नक्साल, नागपोखरीमा अवस्थित नासा रोयल इन्फिल्डर्समा रोयल इन्फिल्डका बाइक सर्भि्सिङ र मर्मत गरिन्छ ।
नेकपामा कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ?
नेकपाको संगठन परिचालनमा महत्त्वपूर्ण मानिने शक्तिशाली संगठन विभागको जिम्मेवारी वामदेव गौतमले पाउने भएका छ्न् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका गौतमले यसपटक रोजेकै विभाग पाउन लागेका हुन् । विगतमा आफूसँग गरिएका प्रतिबद्धता पालना नगरेको भन्दै गौतम ओलीसँग रुष्ट थिए ।
बालुवाटारमा बिहीबार राति बसेको नेकपाका पूर्वएमाले पक्षका नेताको बैठकले गौतमलाई संगठन विभागको नेतृत्व दिने सहमति गरेको हो । विभागको नेतृत्वसम्बन्धी सहमति आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकमा पेस हुनेछ । ओलीले गौतमलाई पुनः आफ्नै समूहमा ल्याउन रोजेकै विभाग दिन लागेका हुन् । केही दिनअघि ओलीले गौतमलाई बोलाएर लामो छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा ओलीले मिलेर जाने प्रस्ताव राखेका थिए । गौतमले भने सक्रिय भूमिका दिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि ओलीले संगठन विभागमा रामबहादुर थापालाई लैजाने तयारी गरेका थिए । पूर्वएमालेको सन्तुलन नबिगार्नका लागि गौतमलाई नेतृत्व दिने निर्णयमा ओली पुगेका हुन् । कान्तिपुरका अनुसार विदेश विभागको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दिने सहमति भएको छ ।
नेपालले यो विभागको नेतृत्व पहिले पनि सम्हालिसकेका छन् । अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई नीति तथा अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । पूर्वएमालेको भागमा परेको स्कुल विभागको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेलाई दिने समझदारी भएको छ । पूर्वमाओवादी पक्षले भने पोखरेलको नामलाई रुचाएको छैन । उसले यो विभागको नेतृत्व आफैंले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
अरुण थापाको स्मृतिमा सांस्कृतिक संस्थानमा विशेष कार्यक्रम हुँदै
लोकप्रिय गायक अरुण थापाको २० औँ स्मृति दिवसको अवसरमा सांस्कृतिक संस्थानले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । आइतबार ‘सम्झनामा अरुण थापा’ नामक कार्यक्रमा नाचघरका कलाकारले गायक थापाका बहुचर्चित गीत प्रस्तुत गर्ने संस्थानमा महाप्रवन्धक राजेश थापाले बताए । कार्यक्रम आइतबार दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय नाचघर, जमलको मिनी प्रेक्ष्यालयमा हुँदैछ ।
अरुण थापा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका त्यस्ता नक्षत्र हुन् जसले थोरै गीत गाएर पनि आफुलाई अब्बल गायकको रुपमा स्थापित गरे । विक्रम २००८ सालमा जन्मिएका थापाका ऋतुहरुमा तिमी, जति माया लाए पनि, चोट के हो व्यथा के हो लगायतका गीतहरु अहिले पनि श्रोताको रोजाईमा पर्ने गीत हुन् । थापाको वि.सं. २०५६ साउन ५ गते काठमाडौँमा निधन भएको हो ।
काठमाडौं। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणतिर रहेकाले मनसुनी गतिविधि देशैभरि सामान्य सक्रिय रहेको छ।
मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणबाट केही तल रहेकाले मनसुन पूर्ण सक्रिय हुन् अझै केही समय लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले बताए। अहिले मनसुन देशभरि नै सामान्य सक्रिय छ भन्दै उनले पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने पश्चिम क्षेत्रमा आंशिक तथा सामान्य बदली हुने जानकारी दिए।
महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा १५ .० मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यस्तै पोखरामा ६०.०, सिमरामा ७.०, नेपालगञ्जमा ५४.० र जुम्लामा ०.३ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। राति देशभर सामान्य बदली रहीे केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै उक्त महाशाखाले आगामी २४ घण्टाको मौसम पूर्वानुमान जारी गर्दै देशका मध्य र पूर्वी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रका पहाडी भू–भागमा पहिरो जान सक्ने र पहाड तथा चुरेबाट बहने खोलामा जल सहत बढ्न सक्ने भएकाले सामान्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनकी पत्नीले घोषणा गरे मरणोप्रान्त अंगदान
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनकी पत्नी सरस्वती ज्ञवालीले मृत्यु पश्चात अंगदान गर्ने मन्जुरीनामामा आज हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्जुरीनामामा उनले उल्लेख गरेका छन् ‘‘मेरो मृत्यु पश्चात मेरो शरीरबाट मृगौला–मुटु–फोक्सो–कलेजो–प्याँक्रियाज–सानो आन्द्रा झिकी मृगौला–मुटु–फोक्सो–कलेजो–प्याक्रियाज–सानो आन्द्रा आवश्यक भएको जुनसुकै बिरामी व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न मेरो मन्जुरी भएकोले मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५को दफा १६को उपदफा(१)को खण्ड (ख) बमोजिम् जानी बुझी स्वेच्छाले यो मञ्जुरीनामा लेखि दिएको छु । ’’
ज्ञवाली दम्पत्तिले आज सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरमा मरणोप्रान्त अंगदानको घोषणा गरेका हुन् ।